माघ, काठमाडौँ । हरेक मानिसको आ आफ्नो व्यक्तित्व हुन्छ । व्यक्तित्व मानिसको आचरण हो । व्यक्तित्व बाहिरी आवरणमा मात्र भर पर्ने कुरा होइन, आफूलाई अरुसामु कसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्ने पनि हो । रुप , अनुहार र पहिरनले मात्र व्यक्तित्व निर्धारण गर्दैन । वा मानिसको व्यक्तित्व झल्कँदैन । बरु कसरी बोलिन्छ, कसरी खाइन्छ अनि कसरी हिँडिन्छ आदि कुरामा पनि आफ्नो व्यक्तित्व निर्भर रहन्छ । व्यक्तित्वमै सफलताको रहस्य लुकेको हुनाले सफलता प्राप्तिका लागि व्यक्तित्व निर्माण अत्यावश्यक छ । आफ्नो कस्तो पहिचान बन्छ भन्ने कुरा पनि व्यक्तित्वकै आधारमा तय हुन्छ । यसकारण कुनै पनि क्षेत्रमा प्रगति गर्न व्यक्तित्व प्रभावशाली बनाउनु जरुरी छ । प्रभावशाली व्यक्तित्वबिना सफलता प्राप्त गर्न असम्भव हुन्छ ।
कसरी गर्ने त व्यक्तित्व विकास ?
१ आन्तरिक क्षमता : आन्तरिक क्षमता सफल जीवनका लागि महत्वपूर्ण पक्ष हो । यस्तो शीपले दैनिक जीवनमा वा मानिसहरूसँग साक्षात्कार गर्दा उपयोगी साबित हुन्छ । यस्तो क्षमता भएका व्यक्तिलाई समूहले पनि आवश्यकता महसुस गर्छ । प्रोफेसनल जीवनमा मात्र नभएर व्यक्तित्व विकासमा पनि आन्तरिक क्षमताले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।
२. असल श्रोता – असल व्यक्तित्वका लागि श्रोता बन्न अति नै आवश्यक पर्छ । एकतर्फी शिक्षाले केही कुरा सिक्न सकिन्छ, न त कसैलाई प्रभावित पार्न नै सकिन्छ । एउटा असल श्रोता बन्न सकेमा साथीहरुको ज्ञान बाट थुप्रै कुरा सिक्न सकिन्छ । त्यसैले पनि बब्क्ता मात्र नबनी उत्कृष्ट श्रोता बन्नु पनि आशश्यक छ । र यो एउटा राम्रो कला पनि हो । तपाईंले कसैको कुरा ध्यानपूर्वक सुन्दै हुनुहुन्छ भने उसले ठान्छ कि ‘मलाई महत्व दिएको छ । ’ यो तपाईको व्यवहारले आत्मीयताको पनि विकास गर्छ ।,
३ . प्रस्तुतीकरण – पस्तुतीकरण पनि तपाईको व्यक्तित्व विकासको महत्वपूर्ण पक्ष हो । यदि तपाईं आफ्नो सूचना धेरैभन्दा धेरै मानिसले थाहा पाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने प्रस्तुतीकरणमा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । प्रस्तुतीकरणले धेरै मानिसलाई आकर्षित गर्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । यो क्षमता जुनसुकै पेसामा आवश्यक छ यसका लागि रचनात्मक सोच विकास गर्नेलगायतका गतिविधि गर्नुपर्छ
४. प्रतिबद्धताप्रति प्रतिबद्ध- इमानदारी वा प्रतिबद्धता व्यक्तित्व विकासका लागि निकै महत्वपूर्ण तत्व हो । यदि तपाईंले कसैसँग वाचा गर्नुभएको छ भने त्यसलाई पूरा गर्न अत्यावश्यक हुन्छ । यस्तो व्यवहारले अरूबाट सम्मान र प्रशंसा आर्जन गर्न सकिन्छ । अरूभन्दा फरक देखाउनका लागि पनि यस्तो व्यवहारले मद्दत र्पुयाउँछ ।
५. नेतृत्व विकास क्षमता – सबै मानिसलाई आफ्नो क्षेत्रमा सफल हुने चाहना हुन्छ । त्यसका लागि नेतृत्व क्षमताको विकास गर्न पनि अपरिहार्य हुन्छ । आफ्नो व्यवहारमा शिष्टाचार, अनुहारमा मुस्कान एवं आत्मविश्वास छ भने सो व्यक्तिको व्यक्तित्वमा चमक पैदा हुन्छ । तनाव, निराशा, क्रोध, चिडचिडेपनजस्ता भावना हामीले हटाउनुपर्छ । यस्ता नकारात्मक भावनाले व्यक्तित्वलाई नै अनाकर्षक बनाउँछ ।
५. सकारात्मक सोच राख्ने – हामीले सधै सकारात्मक सोच राख्नुपर्छ । आफूबाट गल्ती भए क्षमा माग्न कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन । कसैले सहयोग गरे वा कसैको सेवा लिइएको भए धन्यवाद भन्न कहिल्यै बिर्सनुहुँदैन । आफ्नो गल्ती लुकाउने , अरूमाथि दोष थोपरेर पन्छिने स्वभावले आफ्नै व्यक्तित्वमा नकारात्मक असर पुराउँछ । यी कुराहरुमा मात्र ध्यान दिएको खण्डमा पनि आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्न सहयोग पुराउँछ ।